.::How to Make Batch Yourself & Some Batch Code::. | Shwekoyantaw
.::How to Make Batch Yourself & Some Batch Code::.
Published : 6:07 AM Author : shwekoyantaw
Post by Nyi Panig Lay
အချို့ဟာတွေကျတော့ screen shot ရိုက်ဖို့ခက်ခဲလို့မထည့်လိုက်ပါဘူး..
ကုတ်တွေကို အသုံးပြုပုံကတော့ notepad ကိုဖွင့် ပြီးရင် ကုတ်တွေကို ကူးထည့်၊ ပြီးတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်ရဲ့နောက်မှာ .bat လေးထည့်ပေါ်ရုံပဲ.
ပထမဆုံး စမဲ့ကုတ်ကတော့ matrix ကုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်..@echo off ကစပြီး ကူးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်..
Code 1- The matrix look alike code
Code 2- E-bomb
start iexplore nyipainglay.wall.fm
အပေါ်က ကုတ်ရဲ့ nyipainglay.wall.fm ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကြိုက်တဲ့ url ထည့်ပါ..
msg * Hi Nyipainglay
အပေါ်က ကုတ်ရဲ့ "Hi Nyipainglay"ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကြိုက်တဲ့ စာသားထည့်နိုင်ပါသည်..
Code #4- Current date and time code
Code #5- Black screen march (makes multiple command prompts and overloads computers memory)
Code #6- Simple text book diary log
notepad ကိုဖွင့်လိုက်ပါ..ပြီးရင် .LOG လို့ရိုက်ပါ..
ပြီးရင် ကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုခုနဲ့ save လိုက်ပါ.. .bat နဲ့မဟုတ်ဘူးနော်..ရိုးရိုး.txt နဲ့ပဲ
save လိုက်တဲ့ .txt ဖိုင်ကို ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ.. အချိန်နဲ့ ရက်စွဲကို ပြနေပါလိမ့်မယ်..
နောက်တစ်ခုပြန်ဖွင့်ရင်လဲ ဒီအတိုင်းပဲပြစေဖို့ ပိတ်ရင် "Don't save" နဲ့ ပဲပိတ်ပါ..
Code #7- Getting your self automated chat
fname=inputbox(" Hi whats your name?")
fname=inputbox(" Whats up?")
fname=inputbox(" Thats kool.")
အပေါ်က ကုတ်လေးတွေကို notepad ထဲကူးပြီးရင် ကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုခုရဲ့နောက်မှာ .vbs လေးထည့်ပေးပါ..
Code #8- code for opening and closing your CD drive
အပေါ်ကကုတ်လေးတွေကို notepad ထဲကူးထည့်ပါ ပြီးရင် ကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုခုရဲ့နောက်မှာ .vbs လေးထည့်ပေးပါ.
Code #9- shutdown computer
avidemux2_cli --run j-1.js --run j-2.js --end
အပေါ်က ကုတ်လေးကလည်း ကွန်ပျူတာကို ပိတ်စေမဲ့ကုတ်လေးပါ.. ထုံးစံအတိုင်း notepad ထဲ ထည့်ပြီး save လိုက်ပါ..
Code #10-shut down computer
ဒါက ကုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ..ကွန်ပျူတာကို run ကနေ shutdown ချမယ့် command ပါ..
shutdown -s -t -00
အပေါ်က command ထဲက 00 ရဲ့နေရာမှာ ကြိုက်တဲ့အချိန်(second) ထားနိုင်ပါတယ်..
ကျွန်တော်ဆို အိပ်ခါနည်းသီချင်းလေးတွေဖွင့်ထားပြီး ဒီကွန်မန်းလေးနဲ့ အိပ်တယ်ဗျ..shtudown -s -t -1800
နာရီဝက်နေရင် သူ့ဘာသာသူ ပိတ်သွားမှာပေါ့နော်..
ဒါလေးတွေ သိရုံနဲ့ တော်တော်တတ်သွားပြီလို့ ကျွန်တော့်လိုထင်မိသူများအတွက် လျှာရှည်လိုက်ပါဦးမယ်..(ကိုယ့်ဘာသာကို ပြောတာပါ:P)
အမှန်ဆို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ရေးနိုင်ရမှာ..သူများရေးထားတဲ့ ကုတ်တွေကူးပြီး ဟိုဆိုက်ပိုစ့်တင်လုပ်နေလို့ ဘယ်သူမှ အထင်ကြီးမှာ မဟုတ်ပါဘူ..
(အထင်ကြီးစေချင်လို့တင်တာလဲမဟုတ်ပါဘူး)ပြောချင်တာက ကုတ်တွေကို ကိုယ်တိုင်နားလည်အောင်လုပ်သင့်တယ်..ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာသာကို ရေးနိုင်ရပါမယ်..
ကိုယ့်ဘာသာကိုရေးတတ်ချင်သူများအတွက် parameter 15 ခုရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ/ချပုံ များကို လေ့လာနိုင်အောင် ကူးယူတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
ဒါကတော့ Script ရဲ့ အစပိုင်းမှာရေးသားရတဲ့ စကားလုံးပါ။ ကျွန်တော်တို့ Win+R ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Run Dialogbox ကျလာပါမယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာ cmd လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ရင် Windows Command Prompt ပေါ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီ Cmd ရဲ့ Dos Mode မှာဆိုရင် C:\_Documents and Settings\_Admin စတဲ့စာတန်းကြီးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ Script တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ အမြင်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ အလုပ်လုပ်လို့ရအောင် @echo off ဆိုတာကိုရိုက်ထည့်လိုက်ခြင်းဖြင့် အထက်က C:\_Documents and Settings\_Admin စာတန်းကို ပျောက်နေစေပါတယ်။
ဒါကတော့ မိမိ ဖော်ပြလိုတာ စာသားကို Dos Mode မှာ Output(မြင်ရအောင်) ပြမယ့် စာတန်းရဲ့ ရှေ့မှာသုံးပါတယ်။ ပြသလိုတဲ့ စာတန်းကို echo ရဲ့ နောက်မှာ ဘားတစ်ချက်ပုတ်ပြီး ရေးပါတယ်။
ဥပမာ။ nyipainglay is regestered member of MHF. ကိုရေးချင်တယ်ဆိုပါစို့…
echo nyipainglay is regestered member of MHF
echo နောက်မှာ ဖူးစတော့(.) ပါလာရင်တော့ တစ်ကြောင်းခြားလိုက်တာပါ။ စာတန်းတွေ ကြည့်လို့ ကောင်းအောင် ချဲလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။
Full Column & Under Score သင်္ကေတနှစ်ခုပါတဲ့ Keyword ကတော့ Script တစ်ခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆိုတာကို သတ်မှတ်ပေးတာပါ။ ခေါင်းစဉ်ငယ်ပေါ့ဗျာ။
color ဆိုမှတော့ အရောင်ပေါ့ဗျာ……. Background Color နဲ့ စာလုံး Color ကိုရွေးပေးတာပါ။ ဥပမာ အနေနဲ့ 0A ဆိုရင် ရှေ့က0က နောက်ခံ Background, နောက်က A က စာလုံးအရောင် ကိုပြောတာပါ။
အကယ်လို့များ0မပါပဲ A တစ်လုံးထဲရေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ Background အရောင်ဟာ Default အရောင် ဖြစ်တဲ့ အနက်ရောင်ပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ အရောင်တွေနဲ့ ပါတ်သက်လို့ keyword တွေကို သိချင်တယ်ဆိုရင် cmd ထဲမှာ color/? ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပြီး ရှာကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
6. set val=
ဒါကတော့ ရှင်းပြရင်နည်းနည်းပိုရှုပ်မယ်။ လုပ်ရင်းနဲ့တော့ နားလည်သွားမှာပါ။ အကြမ်းပြောပြရမယ်ဆိုရင် user က Input တစ်ခုသွင်းလိုက်တဲ့ အခါ အဲ့ဒီ Input ကို Val ဆိုတဲ့ ကိန်းရှင်တစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်မယ်လို့ပြောတာပါ။ Variable အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ အနက် String အမျိုးအစားပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာပါ။ ဒီနေရာမှာ set ဆိုတဲ့ keyword က အသေဖြစ်ပေမယ့် val ကတော့ ကြိုက်ရာပေးလို့ရပါတယ်။
7. set /p val=
အထက်က နည်းတူပါပဲ။ ဒါကတော့ User ကို Input တစ်ခု ရိုက်ထည့်ပေးဖို့ တောင်းတာပါ။ /p ပါတဲ့ အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ input မဟုတ်ရင် program က အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ val ကတော့ အရှင်ပါ။
ဒါကတော့ ကိန်းရှင်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ပြီးလို့ user က input သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ သတ်မှတ်ထားတာမှန်ရင် ဘာလုပ်ပါ၊ သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ရင် ဘာလုပ်ပါ ဆိုတာကို if နဲ့ရေးပါတယ်။ သိပ်မရှင်းတော့ဘူးဗျာ…. ရှင်းလေရှုပ်လေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ နားမလည်သေးတဲ့လူတွေအဖို့ပေါ့။ နားလည်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ အေးဆေးပေါ့နော်…….. (သူ့ရဲ့နောက်မှာ /I ပါလာရင်( if /I ) ဆိုရင် Input က A =a, ကြီးကြီး၊ သေးသေး အလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ သဘောက်တော့ အရွယ်မရွေးဘူးပေါ့ဗျာ၊ MZ က ဇာနည်အောင်(ဇူဇူး) လိုပေါ့)
ဒါကတော့ သန့်ရှင်းရေးပါ။ Screen မှာ ရှုပ်နေရင် cls ကိုသုံးလိုက်၊ အကုန်ရှင်းပြီးသားပဲ။
ဒါကတော့ တစ်ခုခုလုပ်ပြီးလို့ နားတဲ့အချိန်မှာ ပြသဖို့ ရေးတဲ့စကားလုံးပါပဲ။ ဒီစာလုံးလေးထည့်လိုက်ရင် “Press any key to continue” ဆိုတာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ ဘယ်သွားမလဲ မောင်ရေခဲ ပေါ့။ သွားချင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်ခွဲကို ပြပေးရပါတယ်။ ခဏက အထက်မှာရေးထားတဲ့ “ :_ ” ခေါင်းစဉ်ခွဲကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပါ။
ကော ဆိုမှတော့ ခေါ်တာပေါ့နော်။ လက်ရှိ program ကနေ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ နောက် Program တစ်ခုကို လှမ်းခေါ်တာပါ။ call Hide 1.cmd ဆိုရင် Hide 1.cmd ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို run ပေးပါလိမ့်မယ်။
( တခြား ကော(call) တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ ကိုရသာ၊ ကိုပရင့် တို့နဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ )
လက်ရှိ program ကနေထွက်မယ်လို့ပြောတာပါ။
(MZ က exiter နဲ့လုံးဝ(လုံးဝ) မသက်ဆိုင်ပါ။ အမြဲတမ်း ထွက်နေတဲ့ ကိုထွက်ပေါက်ဟာ Mafia နဲ့မှ ထွက်ပေါက်ရှာမရဖြစ်နေပါတယ်။
14. reg add
ဒါလေးကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ အဓိက အစိတ်အပိုင်းလည်းဟုတ်ပါတယ်။ add ဆိုတော့ ပေါင်းတာ၊ ထည့်တာပေါ့နော်။ reg တွေကို ပေါင်းထည့်ကြတဲ့ အခါ သုံးပါတယ်။ သူ့မှာလည်း ဆင့်ကဲ( လက်ခွဲ ) Parameter လေးတွေ၊ သတ်မှတ်ချက် လေးတွေရှိပါတယ်။ အသုံးများတာက /v, /ve, /t, /d, /f တို့ဖြစ်ပါတယ်။
/v - ကတော့ Value တစ်ခုကိုနာမည်ပေးချင်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ reg add ရဲ့ နောက်မှာ ဘားတစ်ချက်ပုတ်ပြီး ရေးပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့နောက်မှာပဲ ဘားတစ်ချက်ပုတ်ပြီး ထည့်ချင်တဲ့ reg ရဲ့ Value ကိုရိုက်ထည့်ပါတယ်။
/ve - ကတော့ Value Name ကို User က မပေးပါ။ စက်ကပေးတဲ့ Default ကိုပဲ သုံးပါမယ် ဆိုတဲ့ အခါ သုံးပါတယ်။
/t - ကတော့ Value ရဲ့ Data Type ကို ကြော်ငြာတာပါ။ Data Type (၅) မျိုးထဲက ဘယ် Data type ကို သုံးမယ်ဆိုတာကို /t ခံပြီးကြော်ငြာပါတယ်။ ဥပမာ - REG_DWORD ကို ကြော်ငြာမယ်ဆိုရင် /t reg-dword ဆိုပြီး /t နောက်မှာ ဘားတစ်ချက်ပုတ်ပြီး ကြော်ငြာပါတယ်။ /t ဆိုတဲ့ စာသားမပါလာဘူးဆိုရင်တော့ စက်က သူ့ရဲ့ Default Data Type ဖြစ်တဲ့ REG_SZ လို့ပဲ သတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
/d - ကတော့ DATA ကြော်ငြာတာပါ။ ထုံးစံအတိုင်း သူ့နောက်မှာ ဘားတစ်ချက်ပုတ်ပြီး ရေးပါတယ်။
/f - ကတော့ data တစ်ခုကိုထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖျက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်တဲ့အခါ ယခင်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ တန်ဖိုး တစ်ခုခုရှိနေပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ တန်ဖိုးကို ဖျက်မလားလို့ program က user ကို ပြန်မေးတတ်ပါတယ်။ /f ထည့်ထားရင်တော့ မမေးနဲ့ တန်းဖျက်လိုက်ပါလို့ ပြောတာပါပဲ။
15. reg delete
ရှင်းပါတယ်။ ဖျက်တာပေါ့ reg ကိုဖျက်တာပါ။ reg add မှာ တစ်ခုခု ထည့်မယ်ဆိုရင် Value name /v, Data type /t, /d တို့ကို မဖြစ်မနေထည့်ပေးမှ reg တန်ဖိုးထည့်လို့ရမှာပါ။ reg delete မှာတော့ /v တစ်ခု ဖျက်တာနဲ့ တင် လုံလောက်ပါတယ်။ တန်ဖိုးကို ဖျက်မလားလို့ မမေးစေချင်ရင်တော့ တစ်လက်စတည်း /f ပါ ထည့်လိုက်။ ဒါဆိုအရှင်းပဲ………………….
ကျွန်တော်တို့ Script (Program) တစ်ခု မစ ခင်မှာ Program တစ်ခုနဲ့ ပါတ်သတ်လို့ အနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်။ Program တစ်ခုမှာ Input , Process , Output ဆိုပြီးသုံးမျိုးရှိပါတယ်။
Input = User က ထည့်ပေးရတာ
Process = ကွန်ပျူတာက လုပ်ဆောင်ပေးတာ
Output = လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြသပေးတာ
ဒီသုံးမျိုးကို အလျဉ်းသင့်အောင် စဉ်းစားပေးရပါတယ်။ စပြီးမရေးခင်ကတည်းကပေါ့။
အလုပ်လုပ်သွားတဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့ ဒီသုံးမျိုးကို ပတ်လည်ရိုက်တာပါပဲ။ R တာပေါ့ဗျာ…..
Input ------------à Process -------------à Output
ဒီသဘောကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ရေးတယ်- လုပ်တယ် - ဖြစ်သွားတယ်။
Output-----------à Input----------à Process------------à Output
ဒါကတော့ ဖြစ်နိုင်တာတွေ ချပြမယ်။ User ကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးမယ်။ User ကရွေးချယ်လိုက်တဲ့ (Input) ကို ကွန်ပျူတာက အလုပ်လုပ်တယ်။ ပြင်ဆင်တဲ့ အတိုင်းဖြစ်သွားတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ်ရေးမယ့် Script က ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းက သွားမလဲ၊ မမေးမမြန်းတော့ပဲ ထည့်စရာရှိတာတွေထည့်၊ ဖျက်စရာရှိတာတွေ ဖျက်မှာလား။ စသည်ဖြင့်ကို Script မရေးခင် အကြမ်းရေးဆွဲထားသင့်ပါတယ်။ Psuedo Code & Flow Chart တွေတော့ မဆွဲပါနဲ့။ ဒါတွေပါဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ၀င်ဖတ်လိုက်ပါ။ (အဟိ ကြော်ငြာ ၀င်လိုက်တာ )။
ကဲ စပြီး လက်တည့်စမ်းလိုက်ရအောင်ဗျာ………….
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Run Command ကိုဖျောက်ကြည့်မယ်။ တစ်ခါတည်းမပြောမဆို မဖျောက်ဘူးဗျာ။ အရင်မေးကြည့်ပြီးမှ ဖျောက်တာပေါ့။ အောက်က စာသားတွေကို Note Pad ထဲကို ကူးထည့်လိုက်ပါ။
set /p val= Do you want to hide Run Dialogbox(y/n)?
if /I "%val%"=="y" goto -Hide
if /I "%val%"=="n" goto -Quit
reg add hkcu\_software\_microsoft\_windows\_currentversion\_pol icies\_explorer /v NoRun /t reg_dword /d 1
ဒါလေးကိုကူးပြီး notepad ထဲထည့်၊ နောက်ပြီး ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပြီး .cmd နဲ့သိမ်းလိုက်။ ဥပမာ norun.cmd ပေါ့။ သိမ်းလိုက်တဲ့ ဖိုင်လေးကို ကြည့်လိုက်ရင် စက်သွားပုံလေးနဲ့ ပေါ်နေလိမ့်မယ်။ ဒါလေးကိုနှစ်ချက် နှိပ်လိုက်ရင်
Do you want to hide Run Dialogbox(y/n)?
ဆိုတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အနက်ရောင်နောက်ခံပေါ်မှာ အစိမ်းရောင် စာတန်းနဲ့။ Run ကို ပိတ်ချင်တယ် ဆိုရင် y လို့ရိုက်လိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့
ဆိုတာပေါ်လာပြီး ကီး တစ်ခုခုကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ cmd လဲ အလို အလျှောက်ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
n နှိပ်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခါတည်း cmd ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
y , n မဟုတ်တဲ့ တခြားစာလုံး တစ်ခုခုကိုရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ စာသားသာ ထပ် တလဲလဲ ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Script အကြောင်းကို သိချင်တဲ့လူတွေ အတွက်
ဲ့ Script တွေအပြင် တစ်ယောက် က Script ရေး ဒါမှမှဟုတ် ကိုယ်မသိ သေးတဲ့ Script ကိုယူ ပြီးရင် အဲဒီ Script ထဲက Command or Code အကြောင်းတွေကို ဒါက ဘာ ဒါက ဘာလုပ်တာဆိုပြီး သိတဲ့ သူ တစ်ယောက်ယောက် ဒါမှမဟုတ် ၀ိုင်းပြီး တစ်ကြောင်းချင်းကို ရှင်းစေချင်တယ်ဗျာ။
7/ if/I"%val%"=="y" goto -Hide
8/ if/I"%val%"=="y" goto -Quit
13/ reg add hkcu\_software\_microsoft\_windows\_currentversion\_pol icies\_
explorer /v Norun /t reg_dword /d 1
လိုင်းအမှတ်(၁) - "@echo off" Program အစမှာ မပါမဖြစ် ပါရမယ့်စကားပါ။ဒီစကားလုံးမပါရင် Display Window မှာ ရှုပ်ထွေးမှု တွေဖြစ်နေပါမယ်။ဒီစကားလုံးပါတဲ့ အတွက် ကိုယ်ပြောချင်တာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရတာပါ။
လိုင်းအမှတ်(၂) - "color 0A" လို့ရေးထားတာက Program မှာ အောက်ခံအရောင်က အနက်၊ စာလုံးက အစိမ်းရောင်သုံးမယ်လို့ ပြောတာပါ။
လိုင်းအမှန်(၃) - ":-main" လို့ရေးထားပါတယ်။ Program ရေးရာမှာ လွယ်ကူစေရန် Subprogram တွေခွဲပြီး ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီProgram မှာ Input ကို အပိုင်းတစ်ပိုင်း| Process နဲ့ Output ကို အပိုင်းတစ်ပိုင်း | Program ပိတ်ဖို့ကို အပိုင်းတစ်ပိုင်း | စုစုပေါင်း အပိုင်း (၃) ပိုင်းခွဲပြီးရေးမယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ဒါကြောင့် လိုင်းအမှတ် (၃) မှာ ဒါဟာ Program အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို main လို့ အမည်ပေးထားတယ်လို့ ပြောတာပါ။
လိုင်းအမှတ်(၄)(၅) - "echo." ဆိုတာကတော့ မျဉ်းအလွတ် (၂) ကြောင်းခြားပြီးမှ ပေါ်စေချင်လို့ သုံးထားတာပါ။
လိုင်းအမှတ်(၆)(၇)(၈) - Input အပိုင်းပါ။ User ဆီက Input တောင်းမယ်၊ အဲဒီ Input ကို val ဆိုတဲ့ ကိန်းရှင်နဲ့ ဖမ်းယူမယ်။ User ထည့်မယ့် Input ဟာ "y" or "n" ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ ပြောတာပါ။ Input ဟာ "y" (သေးသေးကြီးကြီး) Hide ဆိုတဲ့ subprogram ကိုသွားမယ်လို့ လိုင်းအမှတ်(၇) က ပြောတာပါ။Input ဟာ "n" (သေးသေးကြီးကြီး) Quit ဆိုတဲ့ subprogram ကိုသွားမယ်လို့ လိုင်းအမှတ်(၈) က ပြောတာပါ။
လိုင်းအမှတ်(၉) - User သွင်းလိုက်တဲ့ Input ဟာ "y" လည်းမဟုတ်၊ "n" လည်းမဟုတ် ရင် မူလမေးခွန်းကိုပဲ ပြန်ပေါ်အောင် subprogram main ကိုပြန်သွားဖို့ ပြောတာပါ။
လိုင်းအမှတ်(၁၀) - Subprogram Hide ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတာပါ။
လိုင်းအမှတ်(၁၁)(၁၂) - မျဉ်းအလွတ် ၂ ကြောင်း
လိုင်းအမှတ်(၁၃) - Process အပိုင်းပါ။ User က Hide လုပ်ချင်တယ်လို့ ပြောတဲ့ အတွက် Run Box ကို လက်ရှိ User မှ ပြောက်အောင်လုပ်တဲ့ Registry Setting တွေကို Registry မှာထပ်ထည့်တာပါ။
လိုင်းအမှတ်(၁၄)(၁၅) - မျဉ်းအလွတ် ၂ ကြောင်း
လိုင်းအမှတ်(၁၆) - Program ကနေထွက်ဖို့ ကြိုက်ရာ ခလုတ်တစ်ခုခုကို နှိပ်ပါလို့ စက်က Output ထုတ်ပေးအောင် ထည့်ထားတာပါ။ဒီလိုင်း ကို မထည့် လည်းရပါတယ်။ မထည့်ရင် Program က ချက်ချင်းပိတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိုင်းအမှတ်(၁၇) - Program ကို ပိတ်ဖို့ ရေးထားတာပါ။
လိုင်းအမှတ်(၁၈) - Subprogram Quit ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတာပါ။
လိုင်းအမှတ်(၁၉) - User က "n" ကိုရွေးလိုက်လို့ လာမှမလိုပ်ဘဲ Program တန်းပိတ်ဖို့ ထည့်ထားတာပါ။
ဒီ Script Program ကို ဘယ်လိုရေးသလဲဆိုတာ ရှင်းပြီထင်ပါတယ်။
ဒီblog လေးက တော့ ကိုထူးချွန်ရဲ့ Introduction to WINDOWS REGISTRY ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲကပါ။
ကျွန်တော် နှစ်သက်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
Labels: batch file, script, tutorial |